Kubadda Somali Sport Portal > About Somalia > Health
Cudurka sonkorowga ayay dad badan oo dunida guudkeeda ku nooli ka sheeganayaan, waayadan danbena tirada soomaalida sonkorta qabta ayaa sii kordheysa sanadba sanadka ka danbeya. Fikrada ay dad badani ka heystaan waxa uu yahay cudurka sonkorowga ayaad moodaa in ay wax badani ka qaldan yihiin,hadaba qoraalkeygan ayaan doonayaa in aan wax kaga iraahdo waxa uu yahay cudurka sonkorowgu, waxa keena, inta qeybood oo uu qeybsamo,Calaamdaha uu caanka ku yahay iyo waxyaabo kale oo badan, waxaana isku dayi doonaa in aan usoo bandhigo si fudud oo qof walbi u fahmi karo.
Cudurka koleeraha ayaa ka dilaaca sanad walba wadamada saboolka intooda badan, sababana dhimasha aan yareyn . Dalka somaliya ayaa ka mid ah wadamada uu sida joogtada ah ugu dilaaco cudarkani, dhowrkii sano ee la soo dhaafay dad badan ayaa u le’day cudurkan sababtii gobolo badan oo somaliya ka mid ah, bishii maarso sanadkii 2000 oo keliya dad gaaraya 1191 qof ayuu cudurka koleerahu ku dhacay 63 qof oo dadkaa ka mid ahi waxay u dhinteen cudurkan sababtii ka dib markii uu cudurkani ka dilaacay shan gobol oo somaliya Read more >>>
Cudarka Aids-ka waxa uu fara ba’an ku hayaa malaayiin qof oo dunida guudkeeda ku nool, waxaana u nafwaaya dad aan yareyn maalin walba. Cudarkan oo mashquuliyay maskaxda khubaro badan oo cilmiga sayniska ku takhasusay sidii ay xal ugu heli lahaayeen, dowlado badan iyo hay’ado samafaleedna ay geliyeen maalaayiin doolar oo lacag ah sidii loo xakameyn lahaa cudarkan dilaaga ah. Read more >>>
Cudurka jabtadda ayaa safka hore kaga jira cudarada galmada lagu qaado (sexually transmitted disease) kaas oo khatar ba’an ku haya dadyow badan oo dunida ku nool haba ugu badnaadeen kuwa ku nool waddamada soboolka ah ee aan helin xanaaneyn iyo daryeel caafimaad oo ku filan. Si aynu u ogaano ugana qaadano fikrad guud bal aynu eegno waxa uu yahay cudurka Jabtaddu, waxa sababa, calamaadaha lagu garto bukaha qaba cudurka jabtadda iyo waliba wadooyinka ku haboon ee looga hortegi karo Faafida cudurkan.